FARITRA SAVA : Mpiasan’ny radio miisa 5 niakatra Fitsarana ao Antalaha ny talata 6 oktobra teo
Mpanentana fandaharana iray avy ao Sambava, mpiasana radio avy ao Andapa miisa 4 izay ahitana teknisianina, mpanao gazety, mpanentana fandaharana ary mpitan-tsoratra na sekretera no natolotra ny Fitsarana ao Antalaha, ny talata 6 oktobra teo. 7 octobre 2020
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia voalaza fa naharay fitoriana momba azy ireo ny mpitandro filaminana ary niroso tamin’ny famotorona. Araka ny fanampim-baovao hatrany dia mahakasika ny fifaninanana famaliana ankamantatra nanomboka ny 16 ka hatramin’ny 18 septambra lasa teo, izay heverin’ireo mpitory miendrika fisolokiana no nahatonga ny fitoriana. Araka ny voalaza hatrany dia 10 000Ariary ny fandraisana anjara, ka tsy vitsy ireo izay liana nandoa izany. Voalaza fa izay mahavaly marina amin’ireo ankamantatra rehetra dia mahazo 400 000Ariary fa raha mahavaly roa ihany dia mahazo 100 000Ariary.
Nanaitra ny maro tamin’ny lalao natao ity araka ny vaovao voaray ihany dia tsy araka izay noeritreretin’ny maro ireo valiny. Noho izany dia nahatsiaro ho voasoloky ireo mpandray anjara ka niafara tamin’ny fitoriana izao. Araka ny fanampim-baovao hatrany dia ireo mpiasan’ny radio avy tao Andapa nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo no voalaza fa nanondro ireo mpanao gazety avy tao Sambava, izay voatondro ho niaingan’izao lalao ankamantatra izao. Ireto farany indray no nilaza fa avy any Fenoarivo no nandefa tamin’izy ireo.
Mipetraka ho baraingo, araka izany, izay mety ho niaingan’izao lalao izao, satria hita fa samy milaza ho tsy tompon’antoka ireo andaniny sy ny ankilany. Andrasana araka izany izay mety ho tohiny amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin’ny Fitsarana ao Antalaha mahakasika izao raharaha izao. Araka ny fantatra dia ahitana olona miisa fito no nanao vavolombelona amin’izao raharaha ankamantatra izao ary iray hafa no nametraka fitoriana. Ho fantatra miandalana eo izay mety ho tohiny.